ဧဖက်သြဝါဒစာ အခန်းကြီး။ – Letter to the Ephesians – JESUS UNLTD
ဧဖက်သြဝါဒစာ အခန်းကြီး။ – Letter to the Ephesians
၁ ကျွန်တော်က ပေါလု ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုဆန္ဒကြောင့် ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ တမန်တော် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဧဖက်မြို့မှာ နေထိုင်ကြပြီးတော့ ယေရှုခရစ်တော်ကို သစ္စာရှိရှိအစေခံနေကြတဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့ယုံကြည်သူတွေဆီ ကျွန်တော် စာရေးလိုက်ပါတယ်။
၂ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဖဘုရားသခင်နဲ့ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဆီက ကျေးဇူးတော်နဲ့ ငြိမ်သက်ခြင်းကို လက်ခံရရှိကြပါစေ။
၃ ကျွန်တော်တို့ သခင် ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အဖခမည်းတော်ဖြစ်တဲ့ ဘုရားသခင်က မင်္ဂလာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ခရစ်တော်နဲ့ သက်ဆိုင်ကြလို့ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကို ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ကောင်းကင်ဘုံမှာ သိုလှောင်ထားတဲ့ ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ အပြည့်အဝကို ကျွန်တော်တို့ဆီ ပေးခဲ့ပါတယ်။
၄ လောကကြီးကို မဖန်ဆင်းခင်ကတည်းက ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကို ခရစ်တော်နဲ့ အတူရှိဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ သူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာထဲမှာ အသက်ရှင်ကြရဖို့ ဘုရားသခင်က လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကို သန့်ရှင်းပြီးတော့ သူ့ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာ အပြစ်ကင်းတဲ့သူ ဖြစ်စေချင်ခဲ့ပါတယ်။
၅ ဘုရားသခင်က ယေရှုခရစ်တော်ကတစ်ဆင့် ကျွန်တော်တို့ကို မွေးစားဖို့ ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့အကြံအစည်ကို ဖြစ်မြောက်စေချင်ခဲ့ပါတယ်။
၆ ဘုရားရှင်က သူ့ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်း၊ ဘုန်းကျက်သရေနဲ့ ကျေးဇူးတော် ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ကို မွေးစားခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူချစ်ရတဲ့ ယေရှုခရစ်တော်ကတစ်ဆင့် သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကို ကျွန်တော်တို့အပေါ် သွန်းလောင်းခဲ့ပါတယ်။
၇ ခရစ်တော်က ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကြွေးအတွက် သူ့ရဲ့အသွေးနဲ့ ဆပ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကို အပြစ်ကနေ လွတ်မြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ကျေးဇူးတော်နဲ့ ပြည့်ဝတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အပြစ်တွေကို ခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
၈ ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကို ကျွန်တော်တို့အပေါ် ကြွယ်ဝများပြားစွာနဲ့ သွန်းလောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားရှင်က ဉာဏ်ပညာနဲ့ သိနားလည်ခြင်းအားလုံး ကျွန်တော်တို့ကို ပေးခဲ့ပါတယ်။
၉ ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့လျှို့ဝှက်နက်နဲတဲ့ အလိုတော်ကို ကျွန်တော်တို့ဆီ ဖော်ပြချင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဟိုးအစကတည်းက ဘုရားသခင်က ခရစ်တော်ကအားဖြင့် ဒီအကြံအစည်ကို ပြည့်စုံစေချင်ခဲ့ပါတယ်။
၁၀ ဘုရားသခင်က ကောင်းကင်နဲ့ မြေကြီးပေါ်မှာ တည်ရှိသမျှအရာတွေအားလုံးကို အတူတကွပေါင်းစည်းစေမဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့အချိန် ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီအခါ ခရစ်တော်က အရာအားလုံးအထက်မှာ အုပ်စိုးလိမ့်မယ်။
၁၁ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကို သူ့ရဲ့အမွေဥစ္စာပေးဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ခရစ်တော်နဲ့ သက်ဆိုင်ကြလို့ ဒီအမွေကို လက်ခံရရှိကြဖု့ိ ဘုရားသခင်က အစကတည်းက ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့အကြံအစည်တွေနဲ့ သူ့ရဲ့ဆန္ဒတွေအားလုံးကို ပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ်။
၁၂ ကျွန်တော်တို့က ခင်ဗျားတို့ထက်အရင် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဘုရားသခင်ရဲ့ ကြီးမြတ်မှုနဲ့ ဘုန်းကျက်သရေကို ဝင်ရဖို့ ခရစ်တော်ဆီမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကို ထားကြပါတယ်။
၁၃ ခင်ဗျားတို့လည်း သမ္မာတရားစကားကို ကြားခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒါက ခင်ဗျားတို့ကို အပြစ်ကနေကယ်တင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့က ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဘုရားသခင်က ယေရှုယုံကြည်သူတွေဆီ ပေးဖို့ ကတိထားခဲ့တဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ တံဆိပ်ကို ခင်ဗျားတို့အပေါ် ခတ်နှိပ်ခဲ့ပါတယ်။
၁၄ ဘုရားသခင်ရဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်က ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ အမွေဥစ္စာရှိတယ်ဆိုတဲ့ အာမခံချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်တော်က ကျွန်တော်တို့ကို ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခဲ့လို့ အခု ကျွန်တော်တို့က ဘုရားရှင်နဲ့ သက်ဆိုင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က ဘုရားသခင်ရဲ့ ကြီးမြတ်မှုနဲ့ ဘုန်းကျက်သရေထဲမှာ အသက်ရှင်နေထိုင်ရလိမ့်မယ်။
၁၅ ခင်ဗျားတို့က ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ကြပြီးတော့ ဘုရားရဲ့သန့်ရှင်းတဲ့လူတွေကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာထားတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေ ကျွန်တော် ကြားခဲ့ရပါတယ်။ ၁၆ ဒါကြောင့် ဘုရားသခင်ဆီမှာ ခင်ဗျားတို့အတွက် ကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းသလို ကျွန်တော့် ဆုတောင်းချက်တွေမှာ ခင်ဗျားတို့ကို ပုံမှန်သတိရပါတယ်။
၁၇ ကျွန်တော်တို့ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ ဘုရားသခင်က ဉာဏ်ပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ကို ခင်ဗျားတို့ဆီ ပေးသနားပါစေ။ ဘုန်းကြီးတဲ့အဖခမည်းတော်က သဘာဝလွန်နားလည်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကို ခင်ဗျားတို့ဆီ ပေးဖို့ ကျွန်တော် ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ ဒါမှ ဘုရားသခင်က ဘယ်သူလဲဆိုတာ ခင်ဗျားတို့တွေ အပြည့်အဝ နားလည်လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၈ ဘုရားသခင်ရဲ့အလင်းက ခင်ဗျားတို့အပေါ်မှာ ထွန်းလင်းပါစေ။ ဒါမှ ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့အတွက်ထားတဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ သူ့ဆီခေါ်ယူခြင်းကို ခင်ဗျားတို့ရဲ့နှလုံးသားမျက်စိက မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ သန့်ရှင်းတဲ့ယုံကြည်သူတွေက ဘယ်လိုမျိုး ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းတွေ၊ ဘုန်းကျက်သရေတွေ၊ ဘုရားရှင်ရဲ့အမွေဥစ္စာတွေနဲ့ သက်ဆိုင်နေသလဲဆိုတာ ခင်ဗျားတို့တွေ အပြည့်အဝ သိနားလည်လာလိမ့်မယ်။
၁၉ ကျွန်တော်တို့က ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့အကန့်အသတ်မဲ့ ကြီးမြတ်ခြင်းနဲ့ အစွမ်းတန်ခိုးတွေ ကျွန်တော်တို့ိကို ဖြည့်ပေးပါတယ်။ ဒါကို ခင်ဗျားတို့တွေ ကောင်းကောင်းသိနားလည်နိုင်ကြဖို့ ဘုရားသခင်ဆီမှာ ကျွန်တော် တောင်းလျှောက်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့မဟာတန်ခိုးတော်နဲ့ ကျွန်တော်တို့အထဲမှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
၂၀ ပြီးတော့ ဘုရားသခင်က ခရစ်တော်ကို သေခြင်းကနေ ပြန်ရှင်စေခဲ့တဲ့အချိန်က တန်ခိုးအတိုင်းပဲ ခရစ်တော်ဆီမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ကောင်းကင်ဘုံမှာ ခရစ်တော်ကို သူ့ရဲ့လက်ယာဘက်မှာ ထိုင်စေပြီးတော့ သူ့ကို အချုပ်အချာအာဏာရှိတဲ့ရာထူး ပေးခဲ့ပါတယ်။
၂၁ ဘုရားသခင်က အုပ်ချုပ်သူမင်း ဒါမှမဟုတ် တန်ခိုးအာဏာရှိရှိသမျှ အထက်မှာ ခရစ်တော်ကို ခန့်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ခေါင်းဆောင်ရာထူးမှာရှိတဲ့ တခြားလူတွေထက် ခရစ်တော်ကို တန်ခိုး ပိုပြီးတော့ ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ခရစ်တော်ကို ဒီနှစ်ကာလတစ်လျှောက်တည်ရှိတဲ့ အမည်နာမတွေ ဒါမှမဟုတ် အနာဂါတ်မှာပေါ်ပေါက်လာမဲ့ အမည်နာမတွေအားလုံးထက် ပိုပြီးတော့ ချီးမြှောက်ခဲ့ပါတယ်။
၂၂ ဘုရားသခင်က အရာအားလုံးကို ခရစ်တော်ရဲ့ခြေထောက်အောက်မှာ ထားလိုက်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ခရစ်တော်ကို အားလုံးအထက်မှာ ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခရစ်တော်က အသင်းတော်ရဲ့ဦးခေါင်း ဖြစ်လာပါတယ်။
၂၃ အသင်းတော်က ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်တော်က အသင်းတော်ကို သူ့ရဲ့အတူပါရှိခြင်းမျက်မှောက်တော်နဲ့ ပြည့်စေခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ခရစ်တော်က ပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ အရာအားလုံးကိုလည်း သူ့အားဖြင့် ပြည့်စေခဲ့ပါတယ်။ 1 I am Paul, and I became an apostle of Jesus Christ by the will of God. I am writing to the holy people of God who lives in Ephesus, and serves faithfully to Jesus Christ.
3 God and the Father of our Lord Jesus Christ is blessed. We belong to Christ, and that is why God blessed us. He gave us full spiritual blessing which is stored in heaven.
4 He chose us in Christ before He created the world. He did it so that we would live in His love and be holy and blameless in the presence of God.
5 God decided in advance that He would adopt us through Jesus Christ. And He wanted to fulfill His plan.
6 God adopted us in His greatness, in His glory and in His grace which He poured on us through beloved Jesus.
7 Christ paid for our freedom from sin with His blood. God is full of grace, that is why He forgave us our sins.
8 God poured His grace on us in great abundance. He gave us all the wisdom and understanding.
9 God wanted to reveal to us the secret of His will. And from the very beginning He wanted to fulfill this plan through Christ.
10 The perfect time will come when God will bring together all that exists in heaven and on earth. And then Christ will rule over everything.
11 God planned to give us His inheritance. He decided in advance that we would receive this inheritance because we belong to Christ. And God fulfilled all His plans and His desires.
12 We came to Christ before you did. We put our hope in Him to enter into God's greatness and glory.
13 You also heard the word of truth. It was the Good News that God wants to save you from sin. You believed in Christ, and God put on you the seal of the Holy Spirit which He promised to give to believers.
14 The Holy Spirit isaguaranty that we have an inheritance. Christ redeemed us, and now we belong to God. That is why we can enter God’s greatness and His glory.
15 I heard that you believe in Jesus Christ and you love all the holy people of God.
16 So I regularly thank God for you and remember you in my prayers.
17 May the God of our Lord Jesus Christ give you the Spirit of wisdom. I pray that the Father of glory would give you the Spirit of revelation. And then you could understand fully who God is.
18 May God shine His light upon you. Then the eyes of your heart will see the hope and calling which God has for you. And you will fully realize what kind of riches, glory and God’s inheritance belong to the holy people of God.
19 We believe in Christ. That is why God fills us with His unlimited greatness and power. And I ask Him that you could realize it fully. God works in us with His mighty power.
20 And God worked in Christ with the same power when He raised Him from the dead. God sat Christ in heaven at His right hand and gave Himaposition of authority.
21 God set Christ far above any ruler or authority. He gave Christ much more power than to any other person inaleadership position. God exalted Christ much higher than any name that exists in this age or will appear in the future.
22 God submitted all things under the feet of Christ. God set Him above all, and Christ became the head of the Church.
23 The Church is the Body of Christ. Christ filled the Church with His presence. And He also filled with Himself everything around.
၁ အတိတ်က ခင်ဗျားတို့ဟာ အပြစ်ထဲမှာ အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက် အပြစ်က ခင်ဗျားတို့ကို သေစေခဲ့ပါတယ်။
၂ ဒီလောကသားတွေ လုပ်ကြသလိုပဲ ခင်ဗျားတို့က ပြုမူခဲ့ကြတယ်။ ပြီးတော့ ဒီလောကဟာ လေထဲမှာစိုးစံတဲ့ အုပ်ချုပ်သူကို နာခံတယ်။ ဒီအုပ်ချုပ်သူဟာ ဝိညာဉ် ဖြစ်ပြီးတော့ အခု သူက ဘုရားရှင်စကားကို နားမထောင်တဲ့ လူတွေရဲ့အထဲမှာ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။
၃ ကျွန်တော်တို့က တခြားလူတွေလို ပြုမူခဲ့ကြပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ တပ်မက်ခြင်းနဲ့ တောက်လောင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ပေါ်လာတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာပြုမူချင်တဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်တို့တွေ ပြုမူခဲ့ကြတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က ကျန်တဲ့လူတွေလိုပဲ သဘာဝအလျောက် အမျက်ဒေါသရဲ့ သားသမီးတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
၄ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်က ကြီးမားတဲ့မေတ္တာနဲ့ ပြည့်ဝပြီးတော့ ကရုဏာနဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ အတွက် သူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ကျွန်တော်တို့ဆီ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
၅ အတိတ်က ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘုရားသခင်ကို မနာခံခဲ့ကြလို့ မနာခံခြင်းက ကျွန်တော်တို့ကို သေစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကို ခရစ်တော်နဲ့အတူ အသက်ရှင်စေခဲ့ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို ကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။
၆ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကို ခရစ်တော်နဲ့အတူ အသက်ပြန်ရှင်စေခဲ့ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကို ခရစ်တော်နဲ့အတူ ကောင်းကင်ဘုံမှာ ထိုင်ဖို့နေရာပေးခဲ့ပါတယ်။
၇ အနာဂါတ်မှာ ဘုရားသခင်က မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကြွယ်ဝတဲ့ သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ သနားကြင်နာခြင်းကို ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ဆီ ဖော်ပြလိမ့်မယ်။
၈ ယေရှုခရစ်တော်ကို ခင်ဗျားတို့တွေ ယုံကြည်ခဲ့ကြလို့ ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့ကို ကျေးဇူးတော်နဲ့ ကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ဆီက ဒီလိုမျိုးလက်ဆောင်ကို ဘယ်သူမှ မထိုက်တန်ပါဘူး။
၉ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့် အပြစ်ကနေကယ်တင်ခြင်းကို ထိုက်တန်သလိုမျိုး ဘယ်သူမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မချီးကျူးကြပါစေနဲ့။
၁၀ ယေရှုခရစ်တော်ဆီ ကျွန်တော်တို့တွေ လာတဲ့အခါမှာ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ကို သတ္တဝါသစ်အဖြစ် ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဟိုးအရင်ကတည်းက ကျွန်တော်တို့အတွက် ဘုရားသခင် စီစဉ်ပေးခဲ့တဲ့ ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကို ကျွန်တော်တို့က အခုချိန်မှာ လုပ်ကြပါတယ်။
၁၁ ခင်ဗျားတို့က တခြားလူမျိုးတွေအဖြစ် မွေးလာခဲ့ကြတဲ့အတွက် ယုဒလူမျိုးတွေက ခင်ဗျားတို့ကို အရေးဖျားမလှီးတဲ့သူတွေလို့ ခေါ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယုဒလူမျိုးတွေက ကိုယ့်ဟာကိုယ် အရေဖျားလှီးကြပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရေဖျားလှီးတဲ့သူတွေလို့ ခေါ်ကြတယ်။
၁၂ ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့ကတိတွေကို ပေးခဲ့ပြီးတော့ ဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့ ချိုးဖျက်လို့မရတဲ့ သဘောတူညီချက်ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်တော်မပါဘဲနဲ့ အသက်ရှင်နေထိုင်တုန်းက ခင်ဗျားတို့တွေက ဘုရားရှင်ရဲ့လူတွေနဲ့ မသက်ဆိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ဘဝမှာ မျှော်လင့်ချက်မရှိခဲ့သလို ဘုရားလည်း မရှိခဲ့ပါဘူး။
၁၃ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ခင်ဗျားတို့က ဘုရားသခင်ရဲ့ အဝေးမှာရှိခဲ့ကြပေမဲ့ အခု ခင်ဗျားတို့က ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ သက်ဆိုင်ကြပါတယ်။ သူ့ရဲ့အသွေးတော်က ခင်ဗျားတို့ကို အပြစ်ကနေ သန့်ရှင်းစေခဲ့လို့ ခင်ဗျားတို့က ဘုရားရှင်နဲ့ နီးစပ်လာကြပါတယ်။
၁၄ ခရစ်တော်က ယုဒလူမျိုးတွေနဲ့ တခြားလူမျိုးတွေကို ပြန်လည်သင့်မြတ်စေခဲ့ပြီးတော့ သူတို့ကို တစ်သားတည်း ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်တော်က ကျွန်တော်တို့ အကြားမှာရှိနေတဲ့ နံရံနဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေကို ဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။
၁၅ မောရှေပညတ်ထဲမှာ ပညတ်တော် ၁၀ ချက်နဲ့ စည်းမျဉ်းတွေ အများကြီး ပါခဲ့ပါတယ်။ ယုဒလူမျိုးတွေဟာ မောရှေပညတ်ကို လိုက်နာခဲ့ဲကြပေမဲ့ တခြားလူမျိုးတွေက မလိုက်နာခဲ့ကြပါဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် ယုဒလူမျိုးတွေဟာ တခြားလူမျိုးတွေကို ရန်ဘက်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခရစ်တော်က သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာ အသေခံခြင်းအားဖြင့် ရန်လိုမုန်းတီးမှုတွေကို ဖျက်ဆီးပြီးတော့ မောရှေပညတ်ချက်ထဲက ပညတ်တော်တွေနဲ့ စည်းမျဉ်းတွေကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ ခရစ်တော်က ယုဒလူမျိုးနဲ့ တခြားလူမျိုးတွေကနေ သူ့အတွက် လူမျိုးသစ်တစ်ခုကို ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။
ခရစ်တော်က ယုဒလူမျိုးတွေနဲ့ တခြားလူမျိုးတွေ အကြားမှာ ငြိမ်းချမ်းမှု ယူလာပေးခဲ့ပါတယ်။
၁၆ ခရစ်တော်က ရန်လိုမုန်းတီးမှုတွေကို ကားတိုင်ပေါ်မှာ အသေသတ်ခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်တော်က လက်ဝါးကားတိုင်အားဖြင့် ယုဒလူမျိုးတွေနဲ့ တခြားလူမျိုးတွေကို ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုတည်းအဖြစ် ပေါင်းစည်းခဲ့ပြီးတော့ ဘုရားရှင်နဲ့ ပြန်လည်သင့်မြတ်စေခဲ့ပါတယ်။
၁၇ အတိတ်က တခြားလူမျိုးတွေဟာ ဘုရားနဲ့အဝေးမှာရှိခဲ့ကြပြီးတော့ ယုဒလူမျိုးတွေက ဘုရားနဲ့ နီးခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခရစ်တော်က သူတို့နှစ်ဖွဲ့စလုံးဆီကို လာပြီးတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး သတင်းကောင်းကို ယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။
၁၈ ခရစ်တော်အားဖြင့် ယုဒလူမျိုးတွေနဲ့ တခြားလူမျိုးတွေဟာ စိတ်ဝိညာဉ်တစ်ခုတည်းနဲ့ အဖခမည်းတော်ဆီကို လာကြပါတယ်။
၁၉ အခု ခင်ဗျားတို့တွေက တိုင်းတစ်ပါးသားတွေလို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သူစိမ်းတွေ မဟုတ်ကြတော့ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့တွေက တခြားယုံကြည်သူတွေလိုပဲ ဘုရားနိုင်ငံတော်ရဲ့ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား ဖြစ်လာကြပါတယ်။
၂၀ ခင်ဗျားတို့က တမန်တော်တွေနဲ့ ပုရောဖက်တွေရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်ပေါ်မှာ ဘုရားရှင် တည်ဆောက်တဲ့ အိမ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်လာကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ယေရှုခရစ်တော် ကိုယ်တိုင်က ဒီအိမ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ထဲမှာ ပထမဦးဆုံးနဲ့ အဓိက ကျောက် ဖြစ်ပါတယ်။
၂၁ ဘုရားသခင်က ဒီကျောက်ပေါ်မှာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကို အံဝင်ဂွင်ကျကိုက်ညီတဲ့ အဆောက်အအုံတစ်ခုကို ဆောက်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆောက်အအုံက ကြီးထွားလာပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ဘုရားရှင်နေထိုင်တဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့ဗိမာန် ဖြစ်လာကြပါတယ်။
၂၂ ခင်ဗျားတို့လည်း ခရစ်တော်အားဖြင့် ဒီဆောက်အအုံရဲ့အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်လာကြပြီးတော့ ဒီအဆောက်အအုံထဲမှာ ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်အားဖြင့် အသက်ရှင်နေထိုင်နေပါတယ်။ 1 In the past you lived in sins, and your sins made you dead.
2 You acted the way this world does. And the world obeys the ruler, the spirit who reigns in the air. Now he works in the people who disobey God.
3 We used to behave like everybody else, and we were burning with lust which lived in our body. We did what came into our minds. We acted the way our body wanted to act. And we were children of anger by nature like the rest of the people.
4 But God is full of great love and rich in mercy. That is why He showed us His love.
5 In the past we disobeyed God, and it made us dead. But God made us alive with Christ and saved us by His grace.
6 God resurrected us with Him and seated us in heaven in Jesus Christ.
7 In the future God will show us incredible wealth of His grace and kindness in Christ.
8 You believed in Jesus, so God saved you by grace. No one can deserve suchagift from God.
9 So let no one praise himself that he deserved salvation by his deeds.
10 When we came to Jesus Christ, God made us new creation. And now we do the good works which He planned for us long ago.
11 You were born as the Gentiles, and the Jews call you “uncircumcised”. But the Jews circumcise themselves, and they call themselves “circumcised”.
12 God gave His promises and made an Unbreakable Agreement with the people of Israel. When you lived without Christ, you did not belong to God's people. You had no hope and had no God in your life.
13 At that time you were far away from God. But now you belong to Jesus Christ. His blood made you clean from sin, and you came close to God.
14 Christ reconciled the Jews and the Gentiles, and made them one. He destroyed the barrier which stood between us.
15 The Jews were hostile to the Gentiles because of the Law of Moses, the Commandments and the rules. But Christ destroyed the hostility with His death and cancelled the Law of Moses, the Commandments and the rules. He created one new nation out of the Jews and the Gentiles inside of Himself. Christ brought us peace.
16 Christ killed hostility on the cross. He united the Jews and the Gentiles in one Body through the cross and reconciled them with God.
17 In the past, the Gentiles were far away from God, and the Jews were near to God. But Christ came to both of them and brought them the Good News of peace.
18 Through Christ the Gentiles and the Jews come to the Father in one Spirit.
19 Now you are no longer strangers to one another like foreigners. You became the citizens of the Kingdom of God like the other believers.
20 You became part of the house which God builds on the foundation of the apostles and prophets. And Jesus Christ Himself is the cornerstone in the foundation of this house.
21 On this stone God is constructingabuilding where everything fits together perfectly. The building grows, and we becomeaholy temple where the Lord lives.
22 In Christ you also becameapart of this building, and in this building God lives by His Spirit.
၁ ကျွန်တော် ပေါလုက တခြားလူမျိုးဖြစ်တဲ့ ခင်ဗျားတို့ဆီ ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်း ပြောခဲ့လို့ ထောင်အကျဉ်းသား ဖြစ်နေပါတယ်။
၂ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော့်ကို သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော် ပေးခဲ့လို့ ကျွန်တော်က ယုဒလူမျိုးမဟုတ်တဲ့ တခြားလူမျိုးတွေကို ခရစ်တော်ဆီ ခေါ်လာနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ ကြားခဲ့ကြပါတယ်။
၃ ဘုရားသခင်က သဘာဝလွန်နားလည်နိုင်စွမ်းကတစ်ဆင့် လျှို့ဝှက်နက်နဲတဲ့အရာတစ်ခုကို ကျွန်တော့်ဆီ ဖော်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်း ကျွန်တော် အတိုချူံး ရေးခဲ့ပြီးပါပြီ။
၄ ဒီစာကို ဖတ်ကြပါ။ ဒီလိုဆိုရင် ဘုရားသခင်က ခရစ်တော်အားဖြင့် ကျွန်တော့်ကို ဖော်ပြခဲ့တဲ့ လျှို့ဝှက်နက်နဲတဲ့အရာကို ကျွန်တော် ဘယ်လိုနားလည်ခဲ့တာလဲဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သင်ယူနိုင်ပါတယ်။
၅ အရင်မျိုးဆက်မှာ အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ လူတွေက ဒီလျှို့ဝှက်နက်နဲတဲ့အရာကို မသိခဲ့ကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ ဘုရားရဲ့သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်က သန့်ရှင်းတဲ့တမန်တော်တွေနဲ့ ပရောဖက်တွေဆီ အဲ့ဒါကို ဖွင့်ပြခဲ့ပါတယ်။
၆ ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ကို လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခု ပြောပြချင်ပါတယ်။ သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်တဲ့ တခြားလူမျိုးနဲ့ ယုဒလူမျိုး နှစ်မျိုးစလုံးဟာ ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ သက်ဆိုင်ကြပါတယ်။ သူတို့တွေက ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုရဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေ ဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် တခြားလူမျိုးနဲ့ ယုဒလူမျိုး နှစ်မျိုးစလုံးက ဘုရားသခင်ရဲ့ တူညီတဲ့ကတိတွေကို လက်ခံရရှိနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
၇ ကျွန်တော်က ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ခိုးတော်ကို တွေ့ကြုံခဲ့ရပြီးတော့ ကျေးဇူးတော်ကို လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော့်ကို သူ့ရဲ့အစေခံဖြစ်စေခဲ့လို့ ကျွန်တော်က သတင်းကောင်းကို ဖြန့်ဝေနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၈ ယေရှုကို ယုံကြည်တဲ့ သန့်ရှင်းသူအားလုံးတွေထဲမှာ ကျွန်တော်က ဘုရားအစေခံဖို့ ထိုက်တန်မှု မရှိဆုံးသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော့်ကို ဒီကျေးဇူးတော် ပေးခဲ့လို့ ကျွန်တော်က ခရစ်တော်ရဲ့ အတိုင်းမသိ ကြွယ်ဝမှုအကြောင်း သတင်းကောင်းကို တခြားလူမျိုးတွေဆီ ပြောပြနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၉ ဘုရားသခင်က ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် အရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ အစက သူ့ရဲ့အကြံအစည်ထဲမှာ တခြားလူမျိုးတွေ ဘယ်လိုပါဝင်ကြမလဲဆိုတဲ့ လျှို့ဝှက်နက်နဲတဲ့အရာကို ဘုရားရှင်က ဖွင့်မပြခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော့်ကို သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော် ပေးခဲ့လို့ ကျွန်တော်က ဒီလျှို့ဝှက်နက်နဲတဲ့အရာကို လူတိုင်းဆီ ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။
၁၀ ဘုရားသခင်က အသင်းတော်ကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီးတော့ အသင်းတော်ကတစ်ဆင့် သူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာကြွယ်ဝမှုကို ကောင်းကင်ဘုံက အုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့ အာဏာပိုင်တွေဆီ ပြသခဲ့ပါတယ်။
၁၁ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတစ်ဆင့် ပြည့်စုံစေခဲ့တဲ့ အကြံအစည်တစ်ခု ဘုရားသခင်ဆီမှာ အချိန်အစဦးကတည်းက ရှိခဲ့ပါတယ်။
၁၂ ကျွန်တော်တို့က ယေရှုကို ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေက ယေရှုအားဖြင့် ဘုရားရှင်ဆီကို ရဲရဲရင့်ရင့်နဲ့ စိတ်ချယုံကြည်မှုရှိရှိ လာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၃ ခင်ဗျားတို့ကြောင့် ကျွန်တော် ဒုက္ခဆင်းရဲခံရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒါကြောင့် စိတ်ပျက်မသွားကြဖို့ ကျွန်တော် ခင်ဗျားတို့ကို တောင်းဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကြောင့် ဘုရားရဲ့ဘုန်းကို ခင်ဗျားတို့ တွေ့ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၄ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင် ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ အဖခမည်းတော် ရှေ့မှောက်မှာ ကျွန်တော် ဒူးထောက်ပါတယ်။
၁၅ ကောင်းကင်နဲ့ မြေကြီးမှာ တည်ရှိတဲ့ မိသားစုတိုင်းကို နာမည်ပေးတဲ့ ဘုရားရှင် ရှေ့မှောက်မှာ ကျွန်တော် ဒူးထောက်ပါတယ်။
၁၆ ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့ ခင်ဗျားတို့ကို ကြွယ်ဝစွာ ချမ်းသာစေပါစေ။ ဘုရားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်က ခင်ဗျားတို့ရဲ့အတွင်းလူကို အားကြီးစေပါစေ။
၁၇ ခင်ဗျားတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ခရစ်တော်ကို အသက်ရှင်စေကြပါ။
၁၈ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာထားကြပါ။ ဒီလိုဆိုရင် ခင်ဗျားတို့က ခိုင်မာတဲ့အုတ်မြစ်ပေါ်မှာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအမြစ်တွယ်ပြီးတော့ ရပ်တည်ကြလိမ့်မယ်။ ခရစ်တော်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာက အဝေးထိရောက်ပြီးတော့ ကျယ်ပြန့်တယ်၊ နက်ရှိုင်းပြီးတော့ မြင့်မားတယ်ဆိုတာ သန့်ရှင်းတဲ့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးနဲ့အတူ ခင်ဗျားတို့တွေ နားလည်နိုင်ကြလိမ့်မယ်။
၁၉ ခရစ်တော်က ကျွန်တော်တို့ကို သိပ်ချစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာက ကြီးမားလွန်းလို့ ဘယ်သူကမှ အပြည့်အဝ နားလည်သဘောမပေါက်နိုင်ကြပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့တွေက သန့်ရှင်းတဲ့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးနဲ့အတူ ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ကြဖို့ ကျွန်တော် ဆုတောင်းပါတယ်။ ဒါမှ ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့မျက်မှောက်နဲ့ ခင်ဗျားတို့ကို လုံးဝပြည့်ဝစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့အထဲမှာ တန်ခိုးကြီးစွာနဲ့ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘုရားရှင်က ကျွန်တော်တို့ သူ့ဆီ တောင်းလျှောက်တဲ့အရာ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားတဲ့အကြောင်းအရာထက် ပိုပြီးတော့ အကန့်အသတ်မရှိ လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၂၁ လူသားမျိုးဆက်တွေအားလုံးက ထာဝရဘုရားသခင်ကို ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ အသင်းတော်ထဲမှာ ကမ္ဘာအဆက်ဆက် ချီးမွမ်းကြပါစေ။ အာမင် - ပြည့်စုံပါစေ။ 1 I becameaprisoner because I spoke to you, to the Gentiles, about Jesus Christ.
2 You have already heard that God gave me His grace so that I could bring the Gentiles to Christ.
3 God showed measecret through revelation, and I already wrote about it briefly.
4 Read this letter, and you can learn how I understand the secret which God revealed to me through Christ.
5 People who lived in previous generations did not know this secret. But now the Holy Spirit opened it to the holy apostles and prophets.
6 And this is what the secret is about. Both the Gentiles and the Jews who believe in the Good News belong to Jesus Christ. They became members of one Body. That is why both the Gentiles and the Jews got access to the same promises of God.
7 I experienced the power of God and received grace. God made me His minister so that I could spread the Good News.
8 I am the most unworthy of all the holy people of God. But God gave this grace to me so that I could preach to the Gentiles the Good News about the riches of Christ which is impossible to measure.
9 God created everything through Jesus Christ. And from the very beginning He did not open the secret how the Gentiles would participate in His plan. But God gave me grace, and I reveal this secret to everyone.
10 God created the Church, and through the Church He showed the rich variety of His wisdom to the rulers and authorities which are in the heavenly realms.
11 From the very beginning of time God hadaplan which He fulfilled through our Lord Jesus Christ.
12 We believe in Jesus, and through Him we come to God boldly and confidently.
13 I suffer because of you, but I ask you, do not get discouraged because of this. My sufferings will bring you to glory.
14 I bow down on my knees before the Father of our Lord Jesus Christ.
15 I bow down before God who gave the name to every family that exists in heaven and on earth.
16 May God make you rich with His glory. May His Spirit make your inner man powerful.
17 Let Christ live in your hearts through faith.
18 Love one another, and you will grow deep roots and stand onastrong foundation. Together with all the holy people of God you will be able to understand that the love of Christ extends far and wide, deep and high.
19 Christ loves us so much that it transcends all understanding. I pray that together with all the holy people of God you would experience the love of Christ. And then God will fill you with His presence.
20 God works powerfully in us. And He is able to do immeasurably more than what we ask Him or think about.
21 Let through all ages, all generations of people glorify God in the Church which belongs to Jesus Christ. Amen.
၁ ကျွန်တော်က သခင်ယေရှုအကြောင်းကို ဟောပြောလို့ ထောင်အကျဉ်းသား ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ဆီက လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ခေါ်ခြင်းအတိုင်း ခင်ဗျားတို့တွေ အသက်ရှင်ကြဖို့ ကျွန်တော် တောင်းပန်ပါတယ်။
၂ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် နှိမ့်ချကြပါ။ သနားကြင်နာပြီးတော့ တကယ့်ကို စိတ်ရှည်သည်းခံကြပါ။ တခြားသူတွေမှာ အားနည်းချက်တွေရှိရင်လည်း တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာထားပြီးတော့ လက်ခံပေးကြပါ။
၃ တခြားသူတွေနဲ့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နေထိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ကြပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းကြပါ။ ဒါဆိုရင် ခင်ဗျားတို့တွေအကြား ဝိညာဉ်ရေးရာ တစ်လုံးတစ်ဝရှိလိမ့်မယ်။
၄ ခင်ဗျားတို့က ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့ ဘုရားသခင်က သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တစ်ခုကို ခင်ဗျားတို့အားလုံးဆီ ဖြည့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကို ခင်ဗျားတို့ လက်ခံရရှိခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာ ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့ဆီ မျှော်လင့်ချက် တစ်ခုတည်းကို ပေးခဲ့ပါတယ်။
၅ ခင်ဗျားတို့က သခင်ယေရှုခရစ်တော် တစ်ပါးတည်းကို ယုံကြည်ကြတယ်။ ခင်ဗျားတို့က ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းကို ဝန်ခံကြပြီးတော့ ရေနှစ်ခြင်း ဗတ္တဇံတစ်ခုတည်းကို ခံယူခဲ့ကြပါတယ်။
၆ ဘုရားသခင် တစ်ပါးတည်းက ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက် အဖခမည်းတော် ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့အားလုံးအထက်မှာ စိုးစံပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတစ်ဆင့် အလုပ်လုပ်ပြီးတော့၊ ကျွန်တော်တို့အားလုံး အထဲမှာ အသက်ရှင်ပါတယ်။
၇ ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာ ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကို လက်ခံရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ခရစ်တော်က ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်ချင်းစီကို မတူညီတဲ့ အစွမ်းအစတွေကို ပေးခဲ့ပါတယ်။
၈ ဒါကြောင့် ကျမ်းစာက “ခရစ်တော်က မြင့်တဲ့နေရာကို တက်ခဲ့တယ်၊ သုံ့ပန်းတွေကို ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့ လူတွေကို လက်ဆောင်တွေ ပေးခဲ့တယ်။” လို့ ပြောပါတယ်။
၉ ဒါပေမဲ့အရင်ဆုံး ခရစ်တော်က ကမ္ဘာကြီးရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးနေရာတွေကို ဆင်းကြွလာခဲ့ပြီးမှ သူက မြင့်တဲ့နေရာကို တက်ခဲ့ပါတယ်။
၁၀ ခရစ်တော်က ကမ္ဘာကြီးရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးနေရာတွေကို ဆင်းကြွလာခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီ ခရစ်တော်ကပဲ ကောင်းကင်အားလုံးအထက် အမြင့်ကို တက်ပြီးတော့ အရာအားလုံးကို သူ့ရဲ့ရှေ့မှောက်နဲ့ ဖြည့်လိုက်ပါတယ်။
၁၁ ခရစ်တော်က အသင်းတော်ထဲမှာ တမန်တော်တွေ၊ ပရောဖက်တွေ၊ ဧဝံဂေလိဟောတဲ့သူတွေ၊ သင်းအုပ်တွေ နဲ့ ဆရာတွေကို ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။
၁၂ သူတို့က ဘုရားရဲ့သန့်ရှင်းတဲ့ယုံကြည်သူတွေကို ဖြောင့်မတ်စွာနဲ့ ဘယ်လို အသက်ရှင်နေထိုင်ရမလဲဆိုတာ သွန်သင်ပေးကြပါတယ်။ သူတို့က ဘုရားသခင်နဲ့ တခြားလူတွေကို ဘယ်လိုအစေခံရမလဲ ဆိုတာကိုလည်း သွန်သင်ပေးကြပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာက ကြီးထွားလာပြီးတော့ ခိုင်မာလာပါတယ်။
၁၃ ယုံကြည်ခြင်းမှာ ကျွန်တော်တို့တွေ စည်းလုံးကြရအောင်။ ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်က ဘယ်သူလဲဆိုတာ ပိုပိုပြီးတော့ နားလည်ဖို့ ကျွန်တော်တို့တွေ ပစ်မှတ်ထားကြရမယ်။ ခရစ်တော်ဆီမှာ ကျွန်တော်တို့တွေ ရင့်ကျက်ပြီးတော့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ ကြီးထွားကြရအောင်။ ဒါမှ ခရစ်တော်က ကျွန်တော်တို့အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေ ကိုက်ညီမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၄ ကျွန်တော်တို့တွေက အမှန်တရားကို သံသယဝင်ပြီးေတော့ လေလိုပြောင်းလဲတတ်တဲ့ သွန်သင်မှုအသစ်တွေနောက်ကို လိုက်တတ်တဲ့ မွေးကင်းစကလေးတွေလို ဆက်ဖြစ်မနေသင့်တော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့တွေ ရင့်ကျက်ကြီးထွားကြရအောင်။ ဒါမှ ကောက်ကျစ်တဲ့လူတွေက သူတို့ကြံစည်တဲ့အစီအစဉ်တွေထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ကို မပါဝင်စေကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့တွေက ကျွန်တော်တို့ကို အမှန်တရားကနေ လမ်းမလွဲစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၅ ဘုရားသခင်ရဲ့အမှန်တရားကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ပြောကြရအောင်။ ခရစ်တော်က အသင်းတော်ရဲ့ဦးခေါင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဆောင်သမျှအရာအားလုံးမှာ ခရစ်တော်လို ပြုမူပြီးတော့ ရင့်ကျက်ကြီးထွားကြရအောင်။
၁၆ ခရစ်တော်က ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကို စည်းလုံးစေပြီးတော့ ချိတ်ဆက်မှုမျိုးစုံနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကို အတူတကွ ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ ခန္ဓာရဲ့အဖွဲ့ဝင်အားလုံးက တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် တိတိကျကျ ကိုက်ညီကြပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတိုင်းက သူ့တို့ရဲ့အလုပ်ကို လုပ်ကြပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့် အားလုံးက ကြီးထွားပြီးတော့ ခိုင်မာလာကြတယ်။
၁၇ တိုင်းတစ်ပါးသားတွေလို အသက်မရှင်ကြဖို့ သခင်ယေရှုအမည်နာမနဲ့ ကျွန်တော် လေးလေးနက်နက်နဲ့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ အတိတ်က တခြားလူမျိုးတွေလို ခင်ဗျားတို့တွေ ပြုမူခဲ့ကြတယ်။ တခြားလူမျိုးတွေက အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့အရာတွေကို စဉ်းစားကြပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ အပြုအမူတွေကလည်း အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး။
၁၈ တခြားလူမျိုးတွေက ဘုရားသခင်ကို မသိကြဘူး၊ ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားတွေကို မာကြောစေကြတယ်။ သူတို့ရဲ့အတွေးထဲမှာ အမှောင်ထုက ပြည့်နေပြီးတော့ ဘုရားသခင်ရဲ့အသက်တာကနေ သူတို့ကို ခွဲခြားထားတယ်။
၁၉ သူတို့တွေက ဘာကိုမှ ရှက်တယ်လို့ မခံစားကြဘူး။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ စာရိတ္တပျက်တဲ့အပြုအမူတွေဆီ လုံးလုံးအပ်နှံကြပြီးတော့ ရွံ့စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကို လုပ်ကြတယ်။
၂၀ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့က ခရစ်တော်ဆီကနေ သင်ယူခဲ့ကြတယ်။ ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့က အဲ့ဒီလိုမျိုးအရာတွေကို မလုပ်ရဘူး။
၂၁ အမှန်တရားဟာ ယေရှုဆီမှာ ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ သူ့အကြောင်းကို သိလာတဲ့အခါမှာ ယေရှုက ခင်ဗျားတို့ဆီ အမှန်တရားကို သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။
၂၂ ဒါကြောင့် အကျင့်ဟောင်းဘဝဆီကို ပြန်မသွားကြပါနဲ့။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့အတွင်းလူဆီက အပြစ်လုပ်တတ်တဲ့ဇာတိဟောင်းကို ချွတ်ပစ်ကြပါ။ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အတွင်းလူက လှည့်စားခြင်းထဲမှာ အသက်ရှင်ခဲ့တယ်၊ တပ်မက်မှုတွေနဲ့ လောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်၊ ပြီးတာ့ သူ့ကိုယ်သူ ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။
၂၃ ဝိညာဉ်တော်က ခင်ဗျားတို့ရဲ့စိတ်ကို အသစ်ပြုပြင်ပေးပါစေ။
၂၄ ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့ရဲ့အတွင်းလူကို သူ့ရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်း ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့ရဲ့အတွင်းလူကို ဘုရားသခင်ရဲ့ သဘောသဘာဝသစ်နဲ့ ယူတင်ဝတ်ဆင်ကြပါ။ ဒါမှ ခင်ဗျားတို့ရဲ့အတွင်းလူက ဘုရားသခင်ရဲ့ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်း နဲ့ အမှန်တရားကို လက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂၅ ကျွန်တော်တို့က ခရစ်တော်ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုထဲမှာ အဖွဲ့ဝင်တွေ ဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် မလိမ်ညာကြဘဲနဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အမှန်တရားကို ပြောပြကြပါ။
၂၆ ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာ အမျက်ဒေါသ တောက်လောင်နေတဲ့အချိန်မှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မစော်ကားကြပါနဲ့။ နေရဲ့အလင်းရောင် ပျောက်ကွယ်သလိုပဲ အမျက်ဒေါသက မျက်စိကန်းစေပါတယ်။
၂၇ ခင်ဗျားတို့ဘဝရဲ့ ဘယ်အစိတ်အပိုင်းကိုမှ မကောင်းဆိုးရွားစာတန်ဆီ မပေးကြပါနဲ့။
၂၈ အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ လိုအပ်နေတဲ့သူတွေကို ကူညီကြပါ။ အရင်က ခင်ဗျားတို့ ခိုးတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ခဲ့ရင် ထပ်မခိုးကြတော့ပဲနဲ့ ကောင်းတဲ့အရာတွေကို လုပ်ဆောင်ကြပါ။
၂၉ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အပြောအဆိုမှာ အနိုင်ကျင့်စော်ကားတဲ့စကားလုံးတွေ မသုံးပဲနဲ့ ကြင်နာတဲ့စကားတွေကိုပဲ ပြောကြပါ။ ကြင်နာတဲ့စကားတွေက ခင်ဗျားတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို ခိုင်မာစေပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ စကားနားထောင်တဲ့သူတွေကို ကျက်သရေရှိစေပါတယ်။
၃၀ သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကို စိတ်မနာစေပါနဲ့။ ခင်ဗျားတို့က ဘုရားရှင်နဲ့သက်ဆိုင်ကြပြီးတော့ ဘုရားရှင်က ရွေးနှုတ်ခြင်းနေ့ရက်အတွက် ခင်ဗျားတို့အပေါ် သူ့ဝိညာဉ်ရဲ့တံဆိပ်ကို ခတ်ခဲ့ပါတယ်။
၃၁ ခါးသီးမှုတွေကို တိုးပွားစေပြီးတော့ အပြင်းအထန်ဒေါသ မထွက်ကြပါနဲ့။ စိတ်မဆိုးကြပါနဲ့၊ ပြီးတော့ မအော်ဟစ်ကြပါနဲ့။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မစော်ကားကြပါနဲ့။ ပြီးတော့ ဆိုးယုတ်တဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေ မှန်သမျှမှာ မပါဝင်ကြပါနဲ့။
၃၂ သနားကြင်နာမှုနဲ့ စာနာရိုင်းပင်မှုကို ပြကြပါ။ ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့ကို ခရစ်တော်အားဖြင့် ခွင့်လွှတ်ခဲ့သလို တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ခွင့်လွှတ်ကြပါ။ 1 So I becameaprisoner because I preached about the Lord. And I beg you that the way you live would be according to the calling which you received from God.
2 Do not rise above one another. Be kind and be very patient. Love and accept one another despite the weaknesses.
3 If you keep peace, you will keep spiritual unity. That is why you should make every effort to live in peace with one another.
4 You became members of one Body, and God filled you with one Spirit. You receivedacalling from God, and He gave you one hope.
5 You believe in one Lord. You confess one faith, and you took one baptism.
6 One God became the Father to all of us. And He reigns over all of us, works through all of us, and lives in all of us.
7 Each of us received grace. And Christ gave different abilities to each one of us.
8 So the Scripture says, "He rose toahigh place, took captives into captivity, and distributed gifts to the people."
9 But first Christ came down to earth to the deepest places, and then He rose up toahigh place.
10 Christ came down. And the same Christ rose high above all heavens and filled everything with His presence.
11 Christ appointed in the Church apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers.
12 They equip the holy people of God, so that they could act and serve God. This way the Body of Christ will grow and become strong.
13 Our goal should be to understand more and more who the Son of God is. When we reach the unity in faith then we will become mature and fully grown up in Christ. Then we will meet the standard which Christ made for us.
14 We should not remain babies who doubt and follow the changing winds of different teachings. When we grow up, we will not fall into delusion.
And tricky people will not be able to involve us into their cunning schemes.
15 Let's speak the truth with love. Then we will grow up spiritually and in everything we will become like Christ who is the head of the Church.
16 Christ unites the whole Body and holds it together with various connections. All members of the Body match one another exactly. Every part of the Body does its work. Everyone grows and becomes strong because of love.
17 I ask and insist in the name of the Lord: do not live like other nations. You behaved like the Gentiles in the past. The Gentiles think of meaningless things, and they act in the same way.
18 The Gentiles do not know God and make their hearts hard. The darkness fills their minds and separates them from the life of God.
19 They do not feel any shame. They give themselves completely to immoral activities and practice disgusting things.
20 But you learned from Christ, so you must not do such things.
21 The truth is in Jesus. And when you got to know about Him, He taught you the truth.
22 So do not go back to the old way of life. Take off the old sinful nature from your inner person. Your inner person used to live in deception, used to burn with lust and used to destroy himself.
23 Let the Spirit renew your mind.
24 Put the new nature of God on your inner person who is created in the image of God. And your inner person will receive God's righteousness, holiness, and truth.
25 We became members of one Body of Christ. So do not lie, but tell the truth to one another.
26 Do not insult one another when anger is boiling inside of you. Anger blinds in suchaway that sunlight disappears.
27 Do not give any area of your life to the devil.
28 Work and help needy people. Do good with your hands and do not steal if you used to steal.
29 Do not use abusive words in your speech, but speak only kind words. They strengthen faith and bring grace to those who listen to you.
30 Do not make the Holy Spirit sad. You belong to God, and He put on you the seal of His Spirit so that you would receive salvation on the day of redemption.
31 Do not accumulate bitterness and do not become furious. Do not get angry and do not shout. Do not insult one another and do not participate in any evil activities.
32 Show kindness and compassion. Forgive one another the same way God forgave you in Christ.
၁ ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့ကို ချစ်တယ်၊ ခင်ဗျားတို့က သူ့ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရာရာမှာ ဘုရားသခင်ကို အတုယူကြပါ။
၂ ခရစ်တော်က ကျွန်တော်တို့ကို ချစ်သလို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်ခြင်းမေတ္တာထားကြရအောင်။ ခရစ်တော်ဟာ ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေအတွက် သူ့ရဲ့အသက်ကို ပေးခဲ့ပြီးတော့ သူ့ကိုယ်သူ ယဇ်ပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘုရားသခင်က ခရစ်တော်ရဲ့ပူဇော်သက္ကာကို နှစ်သက်ဖို့ကောင်းတဲ့အမွှေးအကြိုင်အဖြစ် လက်ခံခဲ့ပါတယ်။
၃ ခင်ဗျားတို့ဟာ လိင်ကိစ္စအကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားမှုတွေ၊ မစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေနဲ့ လောဘကြီးခြင်းတွေကို လုံးဝ မပတ်သက်ရဘူး။ ထိုက်တန်တဲ့ဘဝနဲ့ အသက်ရှင်ပြီးတော့ သန့်ရှင်းတဲ့ယုံကြည်သူတွေ ပြုမူတဲ့အတိုင်း ပြုမူကြပါ။
၄ ညစ်ညူးတဲ့စကားလုံးတွေ၊ အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ စကားဝိုင်းတွေမှာ ပါဝင်တာတွေ၊ ရိုင်းစိုင်းတဲ့စကားတွေ နဲ့ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ ရယ်စရာပြက်လုံးတွေကို မပြောကြပါနဲ့။ အဲ့ဒီအစား တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျး ဆက်ဆံကြပါ။
၅ လိင်မှုကိစ္စအကျင့်စာရိတ္တပျက်တဲ့သူနဲ့ ညစ်ညမ်းတဲ့အရာတွေကို လုပ်တဲ့သူက ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အမွေကို ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ အရာဝတ္ထုတွေကို ရုပ်တုဆင်းတုလို ကိုးကွယ်တဲ့ လောဘကြီးတဲ့သူလည်း ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အမွေကို ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီနိုင်ငံတော်မှာ ခရစ်တော်နဲ့ ဘုရားသခင်က စိုးစံအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့တွေ သိသင့်ပါတယ်။
၆ ဘုရားသခင်က သူ့စကားကို မနာခံတဲ့လူတွေနဲ့ အဓိပ္ပယ်မရှိတဲ့စကားတွေနဲ့ ခင်ဗျားတို့ကို လိမ်ညာတဲ့သူတွေကို အမျက်ဒေါသထွက်လိမ့်မယ်။
၇ ဒါကြောင့် ဒီလိုလူတွေနဲ့ လုံးဝ မပတ်သက်ကြပါနဲ့။
၈ အတိတ်က ခင်ဗျားတို့ဘဝမှာ အမှောင်ထုနဲ့ ပြည့်နေခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ ခင်ဗျားတို့အထဲမှာ သခင်ယေရှု ပေးခဲ့တဲ့ အလင်းက ထွန်းလင်းနေပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့က အလင်းရဲ့သားသမီးတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလင်းကို ဖြန့်ဝေစေနိုင်မဲ့နည်းနဲ့ အသက်ရှင်နေထိုင်ကြပါ။
၉ ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကို ကျင့်ပြီးတော့ ဖြောင့်မတ်စွာနဲ့ ပြုမူကြပါ။ အမှန်တရားကို ကောင်းကောင်း သင်ယူကြပါ။ ဒါဆို ခင်ဗျားတို့က ဝိညာဉ်ရဲ့အသီးကို သီးကြလိမ့်မယ်။
၁၀ ဘုရားသခင်ရဲ့ အကြံအစည်တွေကို ပြည့်စုံစေပြီးတော့ ဘုရားသခင်ကို ကျေနပ်စေကြပါ။
၁၁ အမှောင်ထဲမှာ လူတွေလုပ်ကြတဲ့ အကျိုးမရှိတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာ မပါဝင်ကြပါနဲ့။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ ဒီလိုမျိုးအရာတွေအပေါ် ခင်ဗျားတို့်ရဲ့ ငြင်းဆိုဆန့်ကျင်တဲ့သဘောထားကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖော်ပြကြပါ။
၁၂ လူတွေ လျှို့ဝှက်တဲ့နေရာမှာ လုပ်တဲ့အရာတွေအကြောင်းကို ပြောရမှာတောင် ရှက်စရာကောင်းပါတယ်။
၁၃ ဒီလိုမျိုးအရာတွေအပေါ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ငြင်းဆိုဆန့်ကျင်တဲ့သဘောထားကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖော်ပြတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့က အလင်းကို ယူဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
၁၄ ဒါကြောင့် “အိပ်ပျော်တဲ့သူ၊ နိုးပါတော့။ သေခြင်းကနေ ထပါတော့။ ပြီးတော့ ခရစ်တော်က သင့်ကို အလင်းပေးတော့မယ်။” လို့ ဘုရားသခင်က ပြောပါတယ်။
၁၅ ဒါကြောင့် စဉ်းစားပြီးတော့မှ လုပ်စရာတွေကို လုပ်ကြပါ။ ပညာရှိရှိ ပြုမူကြပါ၊ ပညာမဲ့တဲ့သူတွေလို မပြုမူကြပါနဲ့။
၁၆ ခင်ဗျားတို့ဆီကို ဆိုးယုတ်တဲ့နေ့ရောက်လာတဲ့အခါ ခင်ဗျားတို့ရဲ့အချိန်ကို မဖြုန်းကြပါနဲ့။
၁၇ ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင် ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတာကို ခင်ဗျားတို့ နားလည်ကြရမယ်။ ဒါမှ ခင်ဗျားတို့က ဆင်ဆင်ခြင်ခြင်နဲ့ ပြုမူကြမှာ ဖြစ်တယ်။
၁၈ ခင်ဗျားတို့ကို စာရိတ္တပျက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်စေမဲ့ အရက်သေစာနဲ့ မူးယစ်နေမဲ့အစား သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ ပြည့်ဝကြပါ။
၁၉ ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ် ရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ ဆာလံကျမ်းထဲက ချီးမွမ်းသီချင်းတွေကို သီဆိုကြပါ။ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း ဓမ္မသီချင်းတွေနဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းကြပါ။ သန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်က ခင်ဗျားတို့ကိုပေးတဲ့ သီချင်းတွေနဲ့ သခင်ဘုရားကို ချီးမွမ်းကြပါ။ ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေက သခင်ဘုရားကို ချီးမွမ်းရင်း သီချင်းဆိုကြပါစေ။
၂၀ တွေ့ကြုံရတဲ့ အခြေအနေတွေတိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သခင် ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမည်ကတစ်ဆင့် ဘုရားသခင်နဲ့ အဖခမည်းတော်ကို အမြဲတမ်း ကျေးဇူးတင်ကြပါ။
၂၁ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နှိမ့်ချကြပါ။ ဒီနည်းနဲ့ ခင်ဗျားတို့တွေက ဘုရားသခင်ကို အလွန်ရိုသေလေးမြတ်ကြတယ် ဆိုတာကို ပြသနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၂၂ အိမ်ရှင်မတို့၊ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ လင်ယောကျ်ားတွေကို နာခံကြပါ၊ ဒီနည်းနဲ့ ဘုရားသခင်ကို ခင်ဗျားတို့တွေ နာခံကြောင်းပြကြပါ။
၂၃ ခရစ်တော်က အသင်းတော်ရဲ့ဦးခေါင်းဖြစ်တဲ့အတိုင်း လင်ယောကျ်ားက သူ့မိန်းမရဲ့ဦးခေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်တော်က အသင်းတော်ကို အုပ်ချုပ်တာပဲ လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ အသင်းတော်က သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ခရစ်တော်က အသင်းတော်ကို ကယ်တင်တယ်။
၂၄ အသင်းတော်က ခရစ်တော်ကို နာခံပါတယ်။ ပြီးတော့ ဇနီးမယားတွေက အရာရာမှာ သူတို့ရဲ့ လင်ယောကျ်ားတွေကို နာခံကြပါစေ။
၂၅ လင်ယောကျ်ားတို့၊ ခရစ်တော်က အသင်းတော်ကို ချစ်ပြီးတော့ အသင်းတော်အတွက် သူ့ရဲ့အသက်ကိုပေးခဲ့သလိုပဲ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဇနီးမယားတွေကို ချစ်ကြပါ။
၂၆ ခရစ်တော်က ဘုရားရဲ့စကားကို ရေလိုသုံးပြီး အသင်းတော်ကို ဆေးကြောခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်တော်က အသင်းတော်ကို စင်ကြယ်စေခဲ့ပြီးတော့ သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်စေခဲ့ပါတယ်။
၂၇ အခု အသင်းတော်က ခရစ်တော်ရှေ့မှောက်မှာ ရပ်ပြီးတော့ ဘုရားရှင်ရဲ့ ဘုန်းကျက်သရေနဲ့ ပြည့်ဝခဲ့ပါတယ်။ အသင်းတော်မှာ အစွန်းအထင်း၊ အနာအဆာနဲ့ အမှားအယွင်း မရှိဘူး။ အသင်းတော်က သန့်ရှင်းပြီးတော့ အပြစ်တင်စရာမရှိပါဘူး။
၂၈ လင်ယောကျ်ားတွေက သူတို့ရဲ့ ဇနီးမယားတွေကို သူတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လိုပဲ ချစ်ကြရမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားကို ချစ်တဲ့သူက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။
၂၉ လူတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကို ဘယ်တော့မှ မမုန်းပါဘူး။ တနည်းအားဖြင့် လူတိုင်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျွေးမွေးကြတယ်၊ ပြီးတော့ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ဂရုတစိုက်စောင့်ရှောက်ကြတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ခရစ်တော်က အသင်းတော်ကို ကျွေးမွေးပြီးတော့ ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ပါတယ်။
၃၀ အသင်းတော်က ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ခရစ်တော်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဘုရားသခင်က ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ အရိုးကနေ အသင်းတော်ကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ဘုရားသခင်က အာဒံရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့အရိုးကနေ ဧဝကို ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။
၃၁ ဒါကြောင့် လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့အဖေနဲ့ အမေဆီကနေ ခွဲပြီးတော့ သူ့ဇနီးမယားဆီကို ပူးပေါင်းပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းစည်းကြပြီးတော့ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတည်း ဖြစ်လာကြပါတယ်။
၃၂ ပြီးတော့ ကျွန်တော်ပြောမယ်၊ ဒီအရာမှာ အရမ်းလျှို့ဝှက်နက်နဲတဲ့အရာ ပုန်းကွယ်နေပြီးတော့ ဒီလျှို့ဝှက်ချက်က ခရစ်တော်နဲ့ အသင်းတော်ကို ရည်ညွှန်းနေပါတယ်။
၃၃ လင်ယောကျ်ားတိုင်းက ကိုယ့်ရဲ့မိန်းမကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်သလို ချစ်ကြရမယ်။ ပြီးတော့ မိန်းမကလည်း သူ့ရဲ့ယောကျ်ားကို အလွန်ရိုသေလေးစားရပါမယ်။ 1 God loves you, you are His children, so imitate God in everything.
2 Let’s love one another as Christ loves us. He gave His life for our sins and sacrificed Himself. And God accepted the sacrifice of Christ as pleasant aroma.
3 You must have nothing to do with sexual immorality, impure things, and greed. Liveaworthy life and behave the way the holy people of God behave.
4 Do not say impure words, do not take part in silly conversations and do not tell rude jokes. On the opposite be polite with one another.
5 Sexually immoral person and the one who does impure things will not receive the inheritance of the Kingdom of God. Andagreedy person who worships things like an idol will not receive the inheritance of this Kingdom either. You should know that Christ and God rule in this Kingdom.
6 God will be angry with the people who disobey Him, and deceive you with empty words.
7 So have nothing to do with such people.
8 In the past the darkness filled your lives. But now the light that the Lord gave you shines in you. You are the children of the light. So live in suchaway that you would spread the light.
9 Do good deeds and behave righteously. Study the truth well, and you will bear the fruit of the Spirit.
10 Fulfill the plans of God and please God.
11 Do not take part in the fruitless activities which people do in the darkness. On the opposite, show your negative attitude towards such things.
12 It is shameful even to talk about the things that people do in secret.
13 We bring light when we show our negative attitude towards such things.
14 So God says, “Sleeper, wake up and rise from the dead. And Christ will shine on you with His light.”
15 So think and then take actions. Behave wisely and do not act like fools.
16 Do not waste your time on the day when evil comes to you.
17 But you must understand what God wants to do. And then you will be able to act thoughtfully.
18 Do not get drunk with wine which will lead you to an immoral life, but instead be filled with the Spirit.
19 Sing songs of praise from the Psalms which King David wrote. Encourage one another with solemn hymns of worship. Glorify the Lord with the songs which the Spirit gives you. And let your hearts sing and praise the Lord.
20 Always thank God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ in any circumstances.
21 Submit to one another. This way you will show that you haveagreat reverence to God.
22 Wives, obey your husbands. This way you will show that you obey the Lord.
23 A husband is the head of his wife as Christ is the head of the Church. Christ does not only rule the Church. But He also saves the Church because the Church is His Body.
24 As Church obeys Christ so wives must also obey their husbands in everything.
25 Husbands, love your wives as Christ loved the Church and gave His life for the Church.
26 Christ washed the Church with His Word like with water. He cleansed and made the Church holy.
27 Now the Church stands before Christ, and it is filled with God's glory. The Church has no stain, no defect, and no fault. The Church became holy and blameless.
28 Husbands must love their wives as their bodies. He who loves his wife loves himself.
29 A man never hates his physical body. On the opposite, everyone feeds himself and takes care of his body. In the same way the Lord feeds the Church and takes care of it.
30 The Church is the Body of Christ, and we are members of His Body. God created the Church from the physical body of Christ and from His bone. The same way as God created Eve from the physical body of Adam and from his bone.
31 So whenaman gets married, he separates from his father and mother, and attaches to his wife. And the two unite into one in the physical body.
32 And I say, there isagreat secret hidden in this, and the secret relates to Christ and the Church.
33 Every husband must love his wife as he loves himself. And his wife must greatly respect her husband.
၁ သားသမီးတို့၊ မိဘစကားကို နားထောင်ကြပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မိဘစကားကို နားထောင်ခြင်းက မှန်ကန်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ မင်းတို့တွေက သခင်ယေရှုကို နာခံကြတယ်ဆိုတာ ပြသကြပါ။
၂ “ကိုယ့်ရဲ့ အဖေနဲ့ အမေကို ရိုရိုသေသေ ဆက်ဆံကြပါ။” ဒါက ဘုရားရှင် ပေးခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးပညတ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။
၃ “ကမ္ဘာကြီးမှာ မင်းတို့တွေ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပြီးတော့ အသက်ရှည်ရှည်နဲ့ နေကြရလိမ့်မယ်။” ဆိုပြီးတော့ ဘုရားရှင်က ပထမပညတ်ချက်နဲ့အတူ သူ့ရဲ့ကတိကို ပေးထားပါတယ်။
၄ ဖခင်တို့၊ ကိုယ့်ရဲ့ သားသမီးတွေ စိတ်ဆိုးအောင် မလှုံ့ဆော်ကြပါနဲ့။ အဲ့ဒီလို လုပ်တာက သူတို့ကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။ သခင်ယေရှုရဲ့ သွန်သင်ချက်အတိုင်း သားသမီးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ပြီးတော့ ဆုံးမပဲ့ပြင်ကြပါ။
၅ အစေခံကျွန်တို့၊ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ လောကသခင်တွေကို အထူးလေးစားသမှုနဲ့ သစ္စာရှိရှိ နာခံကြပါ။ ခရစ်တော်ကို ခင်ဗျားတို့ နာခံမဲ့အတိုင်း သူတို့ကို နာခံကြပါ။
၆ သူတို့တွေက ခင်ဗျားတို့ကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ မဟုတ်ဘဲနဲ့ သူတို့ကို အမြဲတမ်း စိတ်ကျေနပ်စေကြပါ။ ခင်ဗျားတို့က ခရစ်တော်ရဲ့ အစေခံတွေ ဖြစ်လာပြီမို့လို့ ဘုရားရဲ့ အလိုဆန္ဒကို နှလုံးသားအပြည့်နဲ့ လုပ်ဆောင်ကြပါ။
၇ လူတွေကို မဟုတ်ဘဲ သခင်ယေရှုကို လုံ့လရှိရှိ အစေခံမဲ့အတိုင်းပဲ ခင်ဗျားတို့ရဲ့သခင်တွေကို အစေခံကြပါ။
၈ ကောင်းတဲ့အရာကို လုပ်ကြပါ။ အစေခံကျွန်ဖြစ်စေ၊ လွတ်လပ်တဲ့သူဖြစ်စေ ကောင်းတာလုပ်တဲ့သူတိုင်းကို ဘုရားသခင်က ကောင်းတာနဲ့ ဆုချမယ်ဆိုတာ စိတ်ချကြပါ။
၉ သခင်တို့၊ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အစေခံကျွန်တွေအပေါ် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံကြပါ။ သူတို့ကို မခြိမ်းခြောက်ကြပါနဲ့။ ခင်ဗျားတို့နဲ့ အစေခံကျွန်တွေ အထက် ကောင်းကင်ပေါ်မှာ သခင်တစ်ပါးရှိတယ်ဆိုတာ သတိရကြပါ။ ပြီးတော့ သူက သခင်ဖြစ်ဖြစ်၊ အစေခံကျွန်တွေဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူ့မျက်နှာကိုမှ မထောက်ပါဘူး။။
၁၀ ညီအစ်ကိုတို့၊ သခင်ယေရှုရဲ့ ခွန်အား၊ အစွမ်းသတ္တိနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခိုင်မာစေကြပါ။
၁၁ ဘုရားသခင် ပေးခဲ့တဲ့ ဝိညာဉ်ချပ်ဝတ်တန်ဆာကို အပြည့်အစုံဝတ်ဆင်ကြပါ။ ဒါမှ မကောင်းဆိုးဝါးစာတန်ရဲ့ ဆိုးယုတ်တဲ့ အကြံအစည်တွေကို ခင်ဗျားတို့တွေ ခုခံနိုင်ကြမှာ ဖြစ်တယ်။
၁၂ ကျွန်တော်တို့တွေက ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ အသွေးအသားမရှိတဲ့ ရန်သူကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စစ်ပွဲက အုပ်ချုပ်သူတွေ၊ အာဏာရှိသူတွေ၊ ဒီလောကရဲ့ မှောင်မိုက်ကိုအုပ်စိုးတဲ့ လောကစွမ်းအားရှင်တွေကို တော်လှန်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ မကောင်းဆိုးဝါးဝိညာဉ်တွေက မိုးကောင်းကင်မှာနေကြပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့က သူတို့ကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၃ ဒါကြောင့် ဘုရားရှင်ပေးတဲ့ ဝိညာဉ်ချပ်ဝတ်တန်ဆာကို အပြည့်အစုံဝတ်ဆင်ကြပါ။ ဒါမှ ခင်ဗျားတို့ဆီ ခက်ခဲဆိုးယုတ်တဲ့နေ့ရောက်လာတဲ့အခါ ရန်သူကို ခုခံတားဆီးနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့က အရာအားလုံးကို ကျော်လွှားပြီးတော့ တိုက်ပွဲအပြီးမှာ မားမားမတ်မတ် ရပ်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၄ စစ်သားက သူ့ရဲ့ခါးပတ်ကို ပတ်သလို ဘုရားရဲ့အမှန်တရားကို ခါးမှာ ပတ်ထားကြပါ။ ဘုရားသခင်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရင်အုပ်တန်ဆာလို ဝတ်ဆင်ထားကြပါ။ ဒီနည်းနဲ့ တိုက်ပွဲအပြီးမှာ ခင်ဗျားတို့တွေ ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်ရလိမ့်မယ်။
၁၅ ခရစ်တော်အကြောင်း သတင်းကောင်းက ငြိမ်သက်ခြင်းကို ယူလာပေးပါတယ်။ ဒီ ငြိမ်သက်ခြင်းကို ဖိနပ်လို ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ခြေထောက်မှာ စီးကြပါ။ ပြီးတော့ သတင်းကောင်းကို ဖြန့်ဝေဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်ကြပါ။
၁၆ အရေးကြီးဆုံးက ယုံကြည်ခြင်းကို ဒိုင်းလွှားလို အသုံးပြုကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မကောင်းဆိုးဝါးစာတန်က မြှားတွေကို မီးနဲ့ညှိပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ဆီ ချိန်ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့က ယုံကြည်ခြင်းဒိုင်းလွှားနဲ့ မီးလျှံတွေကို ငြိမ်းသတ်နိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၇ ကယ်တင်ခြင်းကို သံခမောက်လို ခင်ဗျားတို့ခေါင်းပေါ်မှာ ဆောင်းထားကြပါ။ ဝိညာဉ်တော်ကပြောတဲ့ ဘုရားရဲ့စကားကို ဓါးရှည်လို အသုံးပြုကြပါ။
၁၈ ဘယ်အချိန်မဆို ဝိညာဉ်တော်နဲ့ ဆုတောင်းကြပါ။ ဘယ်ဆုတောင်းချက်မှာမဆို ခင်ဗျားတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ကူညီမစပေးဖို့ ဘုရားသခင်ဆီမှာ တောင်းလျှောက်ကြပါ။ ဒီအချက်ကို မမေ့ကြပါနဲ့။
၁၉ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော့်ကို မှန်ကန်တဲ့စကားလုံးတွေပေးဖို့ ကျွန်တော့်အတွက်လည်း ဆုတောင်းပေးကြပါ။ ခရစ်တော်အကြောင်း သတင်းကောင်းကို ကျွန်တော် ရဲရဲဝံ့ဝံဟောပြောနိုင်ဖို့ ဆုတောင်းပေးကြပါ။ ဒါမှ ဘုရားသခင်က ကျွန်တော့်ဆီ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ လျှို့ဝှက်နက်နဲတဲ့အရာကို တခြားသူတွေဆီ ပြောပြနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀ ခရစ်တော်အကြောင်းသတင်းကောင်းကို ပြောခဲ့လို့ လူတွေက ကျွန်တော့်ကို သံကြိုးတွေနဲ့ ချည်နှောင်ထားကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သံကြိုးတွေနဲ့ချည်နှောင်တာတောင်မှ ဘုရားရှင်ဆီက တရားစကားကို ကျွန်တော် သယ်ဆောင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ခရစ်တော်အကြောင်းကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဟောပြောရပါမယ်။ ဒါကြောင့် သတ္တိရှိဖို့ ကျွန်တော့်အတွက် ဆုတောင်းပေးကြပါ။
၂၁ ကျွန်တော် ဘယ်လိုမျိုး အခြေအနေကို ကြုံတွေ့ရတယ်၊ ကျွန်တော် ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ကို သိစေချင်ပါတယ်။ သခင်ယေရှုကို သစ္စာရှိရှိအစေခံနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ညီလေးတုခိတ်က ခင်ဗျားတို့ကို အကြောင်းစုံပြောပြပါလိမ့်မယ်။
၂၂ ကျွန်တော် ခင်ဗျားတို့ဆီ တုခိတ်ကို လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ သူက ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေကို ခင်ဗျားတို့ဆီ ယူလာပေးပါလိမ့်မယ်။ သူက ခင်ဗျားတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးတွေကို ငြိမ်သက်စေမှာပါ။
၂၃ ညီအစ်ကိုတို့၊ အဖဘုရားရှင်နဲ့ သခင်ယေရှုခရစ်တော်က ခင်ဗျားတို့ကို ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ယုံကြည်ခြင်းတွေနဲ့ ဖြည့်ပေးပါစေ။
၂၄ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သခင် ယေရှုခရစ်တော်ကို အမှန်တကယ် ချစ်တဲ့သူတွေအားလုံးအပေါ် ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော် သက်ရောက်ပါစေ။
အာမင် - ပြည့်စုံပါစေ။ 1 Children, obey your parents because it is correct. This way you will show that you obey the Lord.
2 The first commandment, where God gives us His promise, says, “Treat your father and mother with respect.
3 Then you will live in full prosperity, and your life on earth will last for many years.”
4 Fathers, do not provoke your children to anger, because it annoys them. But raise them up and discipline them according to the teaching of the Lord.
5 Slaves, obey your earthly masters with great respect and dedication. Obey them as you would obey Christ.
6 Always please them, and not only when they are watching you. You became the slaves of Christ, so do the will of God with all your heart.
7 Serve your masters as diligently as you would serve the Lord, and not the people.
8 Do what is good. Be sure that for this the Lord will reward every slave and every free person with good.
9 And you, masters, do good to your slaves and do not threaten them. Remember that above you and above the servants there is the Lord in heaven who can see the way you act. He shows no favoritism to you nor to the slaves.
10 Brothers, make yourselves strong with the power and strength of the Lord.
11 Put on the full spiritual armor which God gives you. Then you will be able to resist the evil plans of the devil.
12 We fight against the enemy who has no blood and no physical body. Our war is against the rulers, against the authorities, against powers which rule the darkness of this world. These evil spirits belong to the heavenly realms, and we are fighting against them.
13 Take the full spiritual armor which God gives you so that you could resist the enemy on the day when evil comes to you. Then you will overcome everything. And when the battle is over, you will be standing victorious.
14 So be ready to repel the attack of the enemy. Take the truth and put it on likeamilitary belt. Take the righteousness of God and put it on likeabreastplate.
15 Take the Good News about Christ and put it on your feet like shoes. Then you will be ready to go and bring God's peace to others.
16 But the most important is to take faith and use it asashield. The devil flames the arrows in the fire and aims at you, but you will be able to extinguish the flames of fire with the shield of faith.
17 Take salvation and put it on your head likeahelmet. Take the Word of God which the Spirit speaks and use it asasword.
18 Pray in the Spirit at any time. In any prayer do not forget to ask God to help you with your needs and with the needs of the holy people of God.
19 Pray also for me. Ask God that He would give me right words. Pray that I would boldly preach the Good News about Christ. And then the secret that God revealed to me I would be able to tell others.
20 I becameaprisoner because I preached the Good News about Christ. But even in prison I keep carryingamessage of God. Pray for me, because I must boldly speak about the Lord.
21 I want you to know what kind of situation I experience and what I am doing. Our dear brother Tychicus who serves faithfully to the Lord, will tell you about everything.
22 So I am sending him to you. Tychicus will bring you our news, and your hearts will calm down.
23 Brothers, may God the Father and the Lord Jesus Christ fill you with peace, love and faith.
24 Forever love our Lord Jesus Christ, and you will live in His grace. Amen.